यस्तो पानीले २४ घण्टामै निकाल्दिन्छ कलेजोमा जमेको सबै फोहोर, थाहा पाउनुहोस । – Yuwa Aawaj
यस्तो पानीले २४ घण्टामै निकाल्दिन्छ कलेजोमा जमेको सबै फोहोर, थाहा पाउनुहोस ।
असार १०, २०७८ बिहिबार 327
मानव शरीरलाई स्वास्थ्य बनाउनको लागि, शुद्ध रगत हाम्रो शरीरमा धेरै महत्त्वपूर्ण छ, ताकि कलेजोमा कुनै खराबी नहोस् । जसको कारण धेरै रोगहरू हुन सक्छ ।
त्यसकारण घरमा केहि प्रभावकारी र घरेलु उपचारको सहयोगले हामी कलेजोमा जम्मा भएका फोहोर हटाएर पहिले भन्दा अझ बढी शक्तिशाली बनाउन सक्छौं । हो, तपाईं यस घरेलु उपचार द्वारा आफ्नो कलेजो स्वस्थ बनाउन सक्नुहुन्छ।
किनभने यसको प्रयोगको साथ, यसले २० मिनेटमा कलेजोमा जम्मा भएका सबै फो’होरहरू गायब गराउँछ । तपाईंले यो तथ्यलाई राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ कि कलेजोले हाम्रो शरीरमा रासा’यनिक कारखानाको रूपमा काम गर्दछ।
जस्तो कि हामी दिनमा जति पनि चिजहरुको सेवन गर्छौ जस्तै हामी फ्राइड तरकारीहरू, जंक फूड, आदि लिन्छौं । यसलाई हाम्रो शरीरबाट बाहिर निकाल्ने काम कलेजोले गर्दछ तर यदि कलेजो खरा’ब हुन्छ भने, शरीरलाई के हुन्छ त ?
कलेजो बिग्ररिनु शरीरको लागी घा’तक हुन्छ। र यदि हामी यस समयमा औषधिहरू लिदैनौं तर यी घरेलू उपायहरू अपनाउछौँ भने यो धेरै लाभदायक र प्रभावकारी हुन्छ ।
यो उपचार भन्दा पहिले, हामीले केही चीजहरूको ख्याल गर्नुपर्छ। सुरू गर्नु अघि, बाहिरको खाना कम्तिमा ६ देखि ७ दिन रोकिनुपर्दछ, किनकि यसले छिट्टै प्र’भाव पार्छ ।
हो, तपाईं घरेलु खाना खाने र सलादको अधिक मात्रा खाने प्रयास गर्नुपर्छ। यदि तपाईंले यसलाई नियमित गर्नुभयो भने, तपाईंको कलेजो सँधै स्वस्थ र निको हुनेछ ।
यदि सम्भव छ भने, यस समयमा प्रशस्त फलहरू खानुहोस्। फलफूलहरूमा, सुन्तला, स्याउ, मेवा, तरबूज चु’कंन्दर आदि अधिक लाभदायक साबित हुन्छ । खानमा सँधै दाल र खिचडी खाने कोशीश गर्नुहोस् । कलेजोलाई स्वस्थ राख्नका लागी बेसार पानी पिउनु अत्यन्तै जरुरी हुन्छ ।
Prevब्लड प्रेसर लो भएमा के गर्ने ? अपनाउनुहोस् यी ६ उपायहरु ।
Nextजातीय भे’दभावका आ’रोपित छुटाउने शिक्षामन्त्री श्रेष्ठलाई ब’र्खास्त गर्न माग !
अमेरिकी नागरिक र ग्रिनकार्डवाहकका आफन्त सहजै अमेरिका आउन पाउने !
बलिउड अभिनेता सोनू सूदले गरे फेरी सबैको मन जित्ने यस्तो काम सामाजिक सञ्जाल भरी तारीफ ।